Author Topic: Can only happen in Nepal (3.6 lakh pageviews) (Read 433145 times)
« Reply #110 on: July 01, 2009, 01:57:03 AM »
Quote from: KiNgMaKeR on June 30, 2009, 01:33:51 PM
« Reply #111 on: July 01, 2009, 01:59:27 AM »
Ausi newspaper also thinks this can only happen in Nepal
News in Mysansar
नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुको सामान चोरी हुने गुनासो धेरै आउने गर्छ। त्यसैगरी यात्रुहरुले पनि धेरै झण्झट बेहोर्नुपरेको छ। माइसंसारका एक पाठक बीना गिरीले त नेदरल्यान्ड जाने क्रममा आफूले भोग्नुपरेको झण्झटको बेलिबिस्तार नै यहाँ लगाएकी थिइन्। केही अघि विदेशमा जान लागेका एक यात्रुसँग एक लाख रुपैयाँ घुस मागेको र विरोध गरेपछि खुरुक्क जान दिएको कुरा पनि आएको थियो।
धेरै समयदेखि सुतिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सोमबार के जाँगर चलेछ कुन्नि, त्रिभुवन विमानस्थल, नेपाल वायुसेवा निगम र नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएछ। कस्तो निर्देशन दिएछ हेर्नुस् न-
-त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुको सामान चोरी नियन्त्रण गर्नका निमित्त कर्मचारीलाई खल्ती नभएको युनिफर्म अनिवार्य लगाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरी चोरी कार्यको नियन्त्रण गर्नू
-वैदेशिक यात्रामा जाने क्रममा गलत विवरण पेस गरी गलत व्यक्ति पनि यात्रामा जान सक्ने प्रवृत्तिको नियन्त्रण गर्नू
-सही व्यक्तिले सहजरूपमा वैदेशिक यात्रामा जान पाउने व्यवस्था मिलाउनू।
-यात्रुको ट्राभल डकुमेन्टमा कुनै समस्या आएर प्रस्थान रोक्नुपर्ने अवस्था आएमा कारणसहित लिखित जानकारी दिनू, मुखै जान पाइन्न भनेर रोक लगाउने प्रवृत्ति पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्नू।
लौ यी सब निर्देशन लागू भइदिए त यात्रुहरुलाई हाइसञ्चै हुन्थ्यो नि, हैन ?
बरु एउटा निर्देशन चाहिँ आफ्नै कर्मचारीलाई पनि दिए हुन्थ्यो- अख्तियारको वेबसाइटमा आफ्नै प्रेस विज्ञप्ति अपडेट नभएको सात महिना भइसक्यो। कतै त्यहीँ पनि भ्रष्टाचार त भएन ? लौ खोज्नुस् है खोज्नुस्
« Reply #112 on: July 02, 2009, 06:38:40 AM »
« Reply #113 on: July 02, 2009, 01:17:52 PM »
« Reply #114 on: July 03, 2009, 07:05:46 AM »
रत्‍नपार्कको आकाशे पुलमा पानी जमेर बटुवाहरु यसरी हिँड्न बाध्य छन्।
फोटोः तुलसी मानन्धर
फोटोः सुपिल उदास
« Reply #115 on: July 04, 2009, 06:07:23 AM »
source - hamroaawaz
« Reply #116 on: July 04, 2009, 09:24:46 AM »
« Reply #117 on: July 08, 2009, 10:10:56 AM »
Quote from: KiNgMaKeR on July 04, 2009, 09:24:46 AM
Bikers and pedestrians face difficulties while passing through the water-logged Kantipath at Jamal on Tuesday. Water-logging causes problems to the traffic in many places of the capital because of inefficient drainage system.
(Photo: Narendra Shrestha)
« Reply #118 on: July 08, 2009, 10:16:59 AM »
'झाडापखालाले गाउँ खालि हुनलाग्यो'
बुधवार, 08 जूलाई 2009 08:07 नागरिक
ओमआस्था राई/दीपक दाहाल, काठमाडौं, असार २४-
टेकुस्थित इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका कर्मचारीलाई मंगलबार एकअर्कासँग बोल्ने फुस्रद थिएन। कोही मर्ने र उपचार पाउनेको सुची तयार गर्दै थिए। कोही औषधी र चिकित्सकको विवरण बनाउँदै थिए। जनस्वास्थ्य निरीक्षक गोकर्ण नेपालले भने 'बिहानैदेखि सास फेर्ने फुस्रद छैन।'
व्यस्तताको कारण थियो- जाजरकोटमा फैलिएको झाडापखाला। टेकुको चहलपहल हेर्दा झाडापखाला नियन्त्रणका लागि सरकारी अधिकारी र स्वास्थ्यकर्मी निकै गम्भीर भएजस्तो लागे पनि जाजरकोटका बासिन्दाले राहत महसुस गरेका छैनन्। 'यहाँ त दिनैपिच्छे मान्छे मर्दैछन्'- मंगलबार टेलिफोन सम्पर्कमा आएका सुवानाउली-९ का ३२ बवर्षीय मनबहादुर खड्काले गुहार मागे 'लौ न केही गर्नुपर्यो यहाँ त गाउँ नै खाली हुन लाग्यो।'
रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार मंगलबारसम्म झाडापखालाबाट मर्नेको संख्या जाजरकोटमा मात्रै ५३ पुगेको छ। यसमध्ये ८ बालबालिका छन्। सल्यानमा एक बालक र दैलेखमा एक गर्भवती महिलाको मृत्यु भएको छ। जाजरकोटलाई केन्द्र बनाएर सल्यान, दैलेख र दाङमा समेत फैलिएको झाडापखालाबाट अझ धेरैको मृत्यु भइसकेको खड्काले दाबी गरे। 'मेरो गाउँमा मात्रै १२ जना मरिसकेु खड्काले भने ुअस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन।'
गत वैशाख २० गतेदेखि फैलिएको झाडापखाला सुरुमा जाजरकोटको उत्तर-पूर्वी भेगका केही गाउँमा देखिएको थियो। अहिले यो पश्चिम भेगका गाउँमा फैलिएको छ। 'एकातिर नियन्त्रण गर्छौं अर्कोतिर फैलिन्छ'- जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय खलंगाका प्रमुख डा. कृष्णहरि सुवेदीले भने। अहिले जाजरकोटका कोर्ताङ जुँगाथापा चौर दासेरा लह नायकवाडा सुवानाउली झाप्रा थालारैकर रग्दा रोकाया र सकालामा झाडापखालाले प्रकोपको रुप लिएको छ।
महाशाखाले मंगलबारसम्म जाजरकोटमा १२ सय ५० झाडापखाला रोगीको उपचार गरिसकेको जनाएको छ। यस्तै सल्यान दैलेख र दाङमा झन्डै दुई सयको उपचार गरिएको जनस्वास्थ्य निरीक्षक रेशम लामिछानेले बताए। 'धेरै मानिस प्रभावित भएका छैनन् तर जति प्रभावित भएका छन् तीमध्ये धेरै मरेका छन्'- भर्खरै जाजरकोट पुगेर फर्केका लामिछानेले भने 'यसैले त्यहाँ यति सानो रोग पनि ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ।'
लामो खडेरीपछि भएको बर्षाले मुहान प्रदूषित भएको पानी पिउँदा जाजरकोट लगायतका जिल्लामा झाडापखाला फैलिएको हो। व्यक्तिगत सरसफाइको कमी र समयमै औषधी उपचार नहुँदा यसले प्रकोपको रुप लिएको हो। 'जाजरकोट र सल्यानका केही गाउँका मानिसले भेरी खोलाकै पानी खाँदा रहेछन्'- जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सल्यानका प्रमुख डा. उमाशंकर चौधरीले भने 'अरु गाउँका मानिसले खाने पानीको स्रोत पनि सफा छैन।'
झाडापखाला प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरी मंगलबार साँझ काठमाडौं फर्केका स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. दीर्घिसंह बमले खाद्यान्न अभावले पनि प्रकोप फैलिन सघाएको बताए। 'गाउँलेहरु जंगलबाट विभिन्नथरि च्याउ र साग ल्याएर खाँदा रहेछन्'- डा. बमले भने 'यसले पनि झाडापखाला फैलिएको छ।' धेरै गाउँमा बस्ती छरिएर रहेकाले बिरामीको संख्या यकिन गर्न नसकिएको डा. बमले बताए।
झाडापखाला नियन्त्रणका लागि खलंगास्थित जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतस्थित क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र काठमाडौंस्थित महाशाखाले कम्तीमा ५ वटा टोली जाजरकोट पठाइसकेका छन्। तर काठमाडौंबाट वैशाख ३० र असार २३ गते गएका दुई टोलीमा मात्रै डाक्टर थिए। अन्य टोलीमा जनस्वास्थ्य निरीक्षक स्वास्थ्य सहायक र खोप सहायकमात्रै छन्।
ुडाक्टरको के कुरा हामीलाई त अहेब नै प्रशस्त भए पनि हुन्थ्योु डा। सुवेदीले भने । काठमाडौंबाट तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको नेतृत्वमा गएको टोलीमा सहभागी डा। शंकरबहादुर श्रेष्ठ एक सातापछि फर्किएका थिए । मंगलबार नयाँ स्वास्थ्य मन्त्री उमाकान्त चौधरीको नेतृत्वमा गएको टोलीमा सहभागी डा। इश्वरी उपाध्याय केही दिनबस्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता यशवद्र्धन प्रधानले बताए ।
गाउँमा रोग सदरमुकाममा औषधि
स्वास्थ्य सचिव डा. बमले प्रकोप नियन्त्रणका लागि प्रशस्त औषधी उपलब्ध रहेको बताए । रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा. सेनेन्द्र उप्रेतीको दाबी पनि यस्तै थियो। 'हिजो सोमबारमात्रै युनिसेफले नेपालगाजबाट ९ सय झाडापखाला रोगीलाई उपचार गर्न पुग्ने १९ सय किलो डाइरिया किट पठायो'- डा. उप्रेतीले भने 'मंगलबार पनि स्वास्थ्यमन्त्रीको टोलीसँग धेरै औषधी पठाइएको छ।'
मेट्रोनिनाजोल अल्बेन्डाजोल डेक्सामेथासोन सोडिएम फोस्फेट र जीवनजल लगायत थुप्रै औषधी पटक-पटक जाजरकोट पठाइए पनि तीमध्ये धेरैजसो सदरमुकाममै थुप्रिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख डा.सुवेदीले बताए। 'सदरमुकाममा थुप्रिएको औषधी गाउँमा पुर्याउन सकिएको छैन'- डा.सुवेदीले भने- 'औषधी लिन तीन-चार दिन पैदल हिँडेर सदरमुकाम आउँदा बिरामीको मृत्यु भइसक्छ।'
सदरमुकामबाट टाढा रहेका गाउँमा औषधी पुर् याउन हेलिकोप्टर मागिएको तर सुनुवाइ नभएको उनले बताए। 'प्रत्येक गाउँमा हेलिकोप्टर लान सकिँदैन भने कम्तीमा दुई-तीनवटा गाउँको बीचमा औषधि झार्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गर्यौं'- उनले भने 'तर कसैले सुनेनन्।' वर्षायामको सुरुवातसँगै गाउँका सबै उमेरदार युवा खेतीपातीमा व्यस्त भएकाले सदरमुकामबाट गाउँ-गाउँमा औषधी लैजाने भरियासमेत नपाइएको उनले बताए। 'सदरमुकाममा थुप्रिएको औषधी तत्काल गाउँ-गाउँ पुर् याउन सकिए थप ज्यान बचाउन सकिन्छ'- उनले भने ।
डा. उप्रेतीले भने हरेक जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई सदरमुकामबाट गाउँ-गाउँसम्म औषधि ढुवानी गर्ने बजेटको व्यवस्था गरिएकाले केन्द्रलाई आरोप लाउन नमिल्ने बताए। 'महामारीको बेला स्थानीय निकाय नै जाग्नुपर्छ राजनीतिक दलले पनि चासो दिनुपर्छ'- उनले भने 'सबै कुरामा केन्द्रको मुख ताक्नु त विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तविपरीत भयो।'
« Reply #119 on: July 11, 2009, 02:26:49 AM »